Calaamadaha Giriigga Baabuurka & Warshadda Astaamaha Baabuurka - Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Baabuurka Shiidaalka Baabuurka
Miyaad ku dhegtay "badda baabuurka" oo ma la yaaban tahay macnaha summadaha baabuurka? Astaanta birta ee baabuurka ayaa laga arki karaa nolosheena maalin kasta. Astaanta kala duwan waxay u taagan tahay qiyamka iyo dhaqanka dadka u dhashay. Markaad adigu tahay milkiilaha baabuurka, sidee looga ilaaliyaa albaabka bannaanka adiga oo aan midabkiisu baaba'ayn waa su'aal? Waxaan aad ugu talinay in wax dhaldhalaalka adag oo sidoo kale loo yaqaan cloisonné. Waxay ahayd mid ka mid ah walxaha budada ah ayaa ku hayn kara midabka sumadda mid waara. Ka sokow dhaldhalaalka adag, warshadeena sidoo kale waxay leedahay ku -dayasho adag dhaldhalaalka, dhaldhalaalka jilicsan, daabacaadda si loo dhammeeyo dhammaan faahfaahinta astaanta sumadda baabuurka. Mid kasta oo leh farsamo gacmeed aad u fiican, ku soo dhowow warshadeena si aad noola wadaagto doorbidkaaga sida ugu wanaagsan ee loo soo saaro sumaddaada baabuurka ee ugu habboon. Sujeedo: ● Geedi -socodka: diyaarinta farshaxanka, xardho caaryada, dayactirka midabka, gubida cloisonné, dhagxaanta, isu -uruurinta, dahaadhka dahaarka, hubinta tayada ● Astaamaha: Dusha waarta, kulaylka u adkaysta, biyaha aan caddayn, dareeraha dhaqidda saliidda iyo ka hortagga baabuurka ● Codsiga: qurxinta baabuurka, xusuusta ama hadiyadaha ganacsiga ee shirkadaha ururada.